The Commissioner for Peace and Security for the African Union, Smail Chergui, Wednesday afternoon started a two-day visit in Burundi amidst the east African country's threat to withdraw its peacekeepers from Somalia.
"Somali officials and citizens commend the work of Burundian troops serving in the AMISOM. A senior Somali official wrote on Twitter, saying that Somali people will never forget achievements of Burundian peacekeepers," Nyamitwe said.
Chergui's visit happens at a time when Burundian First Vice-President Gaston Sindimwo earlier this week announced the pullout of Burundian troops serving in the AMISOM over failure by the AU to pay Burundian troops.
Sindimwo said, "If the African Union has failed to pay Burundian troops serving in the AMISOM, we will withdraw them from Somalia, and we will also withdraw their equipment."
The east African country's foreign ministry was recommended to inform the AU of an "imminent pullout an immediate return" of Burundian troops and equipment from Somalia.
In his message to the nation at the New Year's Day, Nkurunziza said that the Burundian government was going to sue the AU over unpaid salaries for Burundian troops serving in the AMISOM.
Following the outbreak of Burundi's crisis in April 2015 with Nkurunziza bidding and winning a controversial third term, some army and police officers were sent to lead peacekeeping missions in Somalia and the Central African Republic, but were refused for their alleged involvement in violent repression during demonstrations against Nkurunziza's third term bid.